बिदेशमा अझै यति धेरैकाे सँख्यामा छन् कोरोना संक्रमित! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > बिदेशमा अझै यति धेरैकाे सँख्यामा छन् कोरोना संक्रमित!
admin November 1, 2020 November 1, 2020 प्रवास, स्वास्थ्य	0
लन्डन, कार्तिक १६ ।कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी दोस्रो लहर शुरु भए देखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा पनि थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार यो साता विदेशमा रहेका थप ९ सय ६३ जना नेपालीहरुलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो । संक्रमति मध्ये ४ सय ५० जना रोमानियामा रहेका नेपालीहरु छन् ।
बिहानै बाँकेमा थप दुई जनाको निधन
युएईबाट आयो अत्यन्तै दुःखद खबरः रोजगारीमा गएकि एक नेपाली महिलाको निधन